Dr. Tint Swe's Writings: Chronic diarrhea နာတာရှည် ဝမ်းပျက်ရောဂါ
၁။ ဆရာ IBS-Irritable Bowel Syndrome အကြောင်းမေးချင်လို့ အစာစားပြီးတိုင်း ဗိုက်နာပြီး ဝမ်းသွားတာ ၁ ပတ်လောက်ရှိပြီ ကျွန်မ ဆရာဝန်တွေက IBS ဖြစ်လောက်တယ် ကုဆေးမရှိတဲ့ ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိ
၂။ ဆရာခင်ဗျား အသက် ၄၀နှစ် ယောက်ျားလေးပါ။ ပြင်ပအထူးကုဆေးခန်း အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဌာနမှာ အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုမမှန်သောရောဂါဖြစ်လို့ ပြနေတာ အခုဆို ၁နှစ်နှင့် ၄လရှိပါပြီ။ ခံတွင်းမပျက်သော်လည်း ဗိုက်မဆာခြင်း ဗိုက်တင်းခြင်း ဗိုက်အတွင်းမှအသံမြည်ခြင်း မကြာခဏလေလည်ခြင်း ဝမ်းသွားအားမရခြင်း ဝမ်းသွား၍ မဝခြင်း ဝမ်းသွား၍မဝခြင်းလက္ခဏာများကို ဆက်လက်ခံစားနေရပါသဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းအောင် ဘာဆေးသောက်သင့်ပါသလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။
ဆောရီး။ ဆေးစာတွေ ဖတ်မရ။ ဆေးရုံမှာ အထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့ပြနေတာကောင်း။ ထူးဖြေရန်မရှိ။
ဆရာခင်ဗျား ဆေးများကပိုးသတ်ဆေး Haxfazimin oမ်းပျော့ဆေးများ ဖိုက်ဘာ probiotic Duspatin135တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခုလက်ရှိသောက်ဆဲက Duspatin135 တမျိုးသာဖြစ်၍ မနက်၁လုံး ည၁လုံးဖြစ်ပါသည်။ ၁နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်သော်လည်း မသက်သာမထူးခြားပါသဖြင့် ဆရာ့ထံအားကိုးတကြီးတိုင်ပင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျား။ ကရုဏာသက်ညှာစွာဖြင့် ဆေးသောက်သင့်ကြောင်းညွှန်ပြပေးပါဆရာ လောလောဆယ် Choa Tonic အားဆေး မနက်၁လုံး ည၁လုံး။ MOM ဝမ်းပျော့ဆေးက ညအိပ်ခါနီး ၃လုံး၁ ကြိမ်။ Duspatin135 ကမနက် ၁လုံး ည၁လုံး သောက်နေသော်လည်းပဲမထူးခြားပါခင်ဗျာ
ရောဂါ မှန်းမရ။ ရမ်းဖြေလို့ မသင့်။
တခြားဆေးစစ်ချက်များက normal ပါတဲ့ဆရာ။ အဲဒီအညွှန်းစာရွက်နဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ပြောပါတယ်ဆရာ။ ဗိုက်အောင့် ဝမ်းပျက် ဝမ်းအရောင်ပြောင်းခြင်း သွေးပါခြင်းမရှိပါဆရာ။ ရောဂါက IRRITABLE BOWEL SYNDROME ပါပဲဆရာ။
၃။ ၃၄ နှစ်၊ မ၊ အိမ်ထောင်ရှိ၊ သမီး ၅နှစ်ပါ။ လက်ရှိပြနေတဲ့ဆရာဝန်က IBS လို့ပြောပြီး Panto-denk 40 duspatin 135 enzystal ၃ မျိုးနဲ့ probiotics သောက်ခိုင်းနေပါတယ်။ probiotics က ဘယ်အချိန်သောက်သင့်ပါသလဲရှင့်။ အစာမစားမီ၊ စားပြီး အစာနှင့်အတူ၊ အစာနှင့်ဝေးဝေး၊ ဆရာ့အားကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
၄။ ဆရာရှင့် chronic diarrhea အကြောင်းသိချင်လို့ပါ။ အမေဖြစ်နေတာ ၁ လ ကျော်ပါပြီ။ အသက် ၇၄ နှစ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
Chronic diarrhea ဆိုတာ နာတာရှည်ဝမ်းပျက်ရောဂါဖြစ်တယ်။ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
Irritable bowel syndrome (IBS) ဝမ်းမငြိမ်ရောဂါက အဓိကဖြစ်စေတယ်။ ဗိုက်နာလိုက်၊ ဝမ်းမကောင်းလိုက်နဲ့ နာတာရှည်ဖြစ်တယ်။ စားတဲ့အစာက Lactose-containing foods ကြောင့်ဖြစ်တာလား၊ Fructose-containing foods ကြောင့်ဖြစ်တာလား ခွဲခြားရမယ်။ ဗိုက်အောင့်မယ်။ ဝမ်းပျက်လိုက် ဝမ်းချုပ်လိုက်ဖြစ်မယ်။
Inflammatory bowel disease အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါများကနေလည်းဖြစ်တယ်။ Crohn disease ရောဂါနဲ့ Ulcerative colitis နှစ်မျိုးကနေဖြစ်စေတယ်။ ရောဂါပြီးစနစ်က အစာလမ်းအစိတ်အပိုင်းတချို့ကို တိုက်ခိုက်နေလို့ ဖြစ်ရတယ်။
Malabsorption syndromes အစာစုပ်ယူမှုမရှိသည့်ရောဂါ။
Intestinal infections အစာလမ်းပိုးဝင်ခြင်းကနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ စားတဲ့သောက်တဲ့ ရေနဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ ရောဂါမပြီးသေးတဲ့ပိုးတွေပါနေလို့ဖြစ်ရတယ်။
Endocrine disorders ဟော်မုန်းရောဂါကနေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ Hyperthyroidism လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းများခြင်း။
Food allergy or sensitivity အစာနဲ့မတည့်ခြင်းကနေလည်းဖြစ်တယ်။ Gluten ဂလူတင်ဓါတ်ကိုမတည့်သူရှိတယ်။
Medicines ဆေးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ ဆရာဝန်တွေညွှန်တဲ့ဆေးအပြင် တိုင်းရင်းဆေးတွေကနေလည်း ဖြစ်တယ်။
ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကို ကုသရပါမယ်။ ရောဂါတခုချင်းစာတွေဖတ်ပါ။ Lactose intolerance လက်တို့စ်နဲ့မတည့်သူ ရှောင်ပါ။ တချို့က သကြားဓါတ်ပါတာမတည့်ပါ။ ဝမ်းလျှောစေတဲ့ဆေးတွေဖြတ်ပါ။
Bismuth (Kaopectate, Pepto-Bismol) ဆေးပေးတယ်။ Loperamide (Imodium) ဆေးပေးတယ်။ Diphenoxylate-atropine (Lomotil) ဆေးပေးတယ်။ Octreotide ဆေးပေးတယ်။ Antibiotics ပဋိဇီဝဆေးလည်း တချို့ကိုပေးတယ်။
နောက်ဆက်တွဲဆက်ဖြစ်နေတွေကိုလည်း ကုသရမယ်။ ရေနဲ့ ဆားနည်းခြင်းအတွက် ဓါတ်ဆားထုပ်သောက်စေခြင်းနဲ့ ရေနဲ့ ဓါတ်ဆား သွင်းပေးခြင်း။ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းအတွက် လိုတဲ့ဓါတ်တွေ ဖြည့်ပေးခြင်း။
1. Anal and perianal disorders စအိုနေရာ ရောဂါများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/12/anal-and-perianal-disorders.html
2. Anorectal diseases စအို-အစာဟောင်းအိမ် ရောဂါများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/12/anorectal-diseases_17.html
3. Antral Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintsweblogspotcom/2015/04/antral-gastritishtml
4. Belching လေတက်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/belching.html
5. Bleeding Peptic Ulcer အစာအိမ်နာ သွေးယိုခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bleeding-peptic-ulcer_25.html
6. Blood in Stool စအိုက သွေးယိုခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/blood-in-stool.html
7. Bloody or tarry stools ဝမ်းအမည်းရောင်သွားခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/bloody-or-tarry-stools.html?q=Stomach+cancer
8. Colorectal cancer အူမကြီး ကင်ဆာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/colorectal-cancer.html
9. Crohn’s Disease ခရုန်းရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/ulcerative-colitis.html
10. Digestive Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ http://doctortintsweblogspotcom/2014/11/digestive-mythshtml
11. Duodenitis အစာအိမ်အထွက် အူသိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/duodenitis.html
12. Dysentery ဝမ်းကိုက်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/dysentery.html
13. Fissure-in-Ano (FIA) စအိုကွဲနာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/10/fia.html
14. Fistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/09/fistula-in-ano-fia.html
15. Food Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ https://doctortintsweblogspotcom/2015/12/digestive-mythshtml
16. Gas Writings လေပွေတယ်ဆရာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/gas-writings.html
17. Gastric cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ http://doctortintsweblogspotcom/2014/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-nonehtml
18. Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/gastritis.html
19. GERD အချဉ်ရည် အထက်ဆန်ခြင်း http://doctortintsweblogspotcom/2014/12/gerdhtml
20. GI Tract အစာလမ်းစစ်ဆေးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/gi-tract.html
21. GI Tract ဖေ့စ်ဘွတ် နဲ့ ဘလော့ဂ် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/gi-tract.html
22. Heartburn ရင်ပူခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/heartburn.html
23. Hiatal hernia ဟာနီယာတမျိုး Hiatal hernia ဟာနီယာတမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/hiatal-hernia.html
24. Hour Glass Stomach သဲနာရီအစာအိမ်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/hour-glass-stomach.html
25. Intestinal TB အူ တီဘီ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/intestinal-tb.html?q=Intestinal
26. Medicine for Diseases of Digestive Tract အစာလမ်း လေနာရောဂါဆေးများ http://doctortintsweblogspotcom/2015/02/gastric-cancerhtml
27. Omeprazole အိုမီပရာဇိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/omeprazole.html
28. Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintsweblogspotcom/2014/11/peptic-ulcer-diagnosis_25html
29. Peptic ulcer လေနာ ဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်းဖြစ်သည် http://doctortintsweblogspotcom/2014/11/peptic-ulcerhtml
30. Piles (Hemorrhoids) Treatment လိပ်ခေါင်းကုနည်းများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/hemorrhoids-treatment.html
31. Piles လိပ်ခေါင်းရောဂါ အမေး-အဖြေများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/07/q-and-on-piles.html
32. Probiotics ပရိုဘိုင်အောတစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/probiotics.html
33. Proctitis စအို ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/proctitis.html
34. Sigmoiditis အူမကြီးတနေရာရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/sigmoiditis.html
35. Stomach cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/stomach-cancer.html
36. Stomach အစာအိမ်ဖြစ်နေတာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/02/stomach.html
37. Ulcerative colitis အူမကြီးရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/ulcerative-colitis.html
Baby and Mom ကလေးကျန်းမာရေး အယူအဆများ မလွဲမှားစေချင်
No alcohol safe to drink အရက်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ စိတ်မချရ
Medicines and Alcohol အရက်နဲ့တွဲရန်မသင့်သောဆေးများ
Openness ပွင့်လင်းမှုဆိုတာ ကိုယ်တုံးလုံးနေတာမဟုတ်ပါ
Cefixime တနေ့ တကြိမ်